Warar - Warqad loogu talagalay Gudiga Gypsum ee Iibinta
Warqad loogu talagalay Gudiga Gypsum. Waxay ka kooban tahay xaashi weyn oo ah gypsum plasterboard oo caadi ahaan gaaraya ilaa nus-dhumuc dhumuc ah (qiyaastii 1 cm), oo inta badan loo kala jaro afar ilaa sideed farood oo cag ah (qiyaastii 1.2 mitir iyo 2.4 kulmiyaha). Warqad qaro weyn oo waara, oo loo yaqaan 'paperwall paper', ayaa safafka labada dhinacba.
Gypsum-board warqad waji ah caadi ahaan boqolkiiba 100 dib ayaa looga warshadeyaa joornaal-daabacadeed, kartoonno, iyo durdurrada qashin-qubka kale ee qashinka, laakiin inta badan dib loo warshadeeyay qalabka boodhadhka darbiyada waa postindustrial, oo laga sameeyay soosaarka gypsum-board. Gypsum board waa in lagu soo iibsadaa cabirro yareynaya baahida jarista (waqti badbaadin iyo qashin).
Gypsum board waa magaca guud ee qoys ka kooban badeecadaha wax lagu qoro. Kuwani waxay ka kooban yihiin xuddun aan guban karin oo ka samaysan gypsum iyo warqad ka soo baxda wejiga, dhabarka, iyo geesaha dhaadheer. Noocyada kala duwan ee looxyada loo adeegsado dhismaha iyo dhismaha waxaa si wada jir ah loogu magacaabaa "alaabada gypsum panel".